Football Khabar » ‘पक्षपात गरेको’ भन्दै रेफ्रीमाथि खनिए मेस्सी !
‘पक्षपात गरेको’ भन्दै रेफ्रीमाथि खनिए मेस्सी !
आफ्नो भूमिमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक ब्राजिलले आज पाहुना टोली अर्जेन्टिनालाई २–० ले हरायो । लिओनल मेस्सीको टिमविरुद्ध क्लिन सिटसहितको जित निकाल्दै ब्राजिल फाइनल पुग्दा अर्जेन्टिनाको भने यसपटक पनि उपाधि जित्ने सपना खरानी भयो । सो खेल दौरान अर्जेन्टिनी कप्तान लिओनल मेस्सीले खेलभरि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि गोल गर्न भने सकेनन् । मेस्सीसहित कुनै पनि फरवार्ड चल्न नसक्दा अर्जेन्टिना गोल गर्न नसकी फाइनल पुग्नबाट चुक्यो । खेलमा अर्जेन्टिनाले ब्राजिलले भन्दा बढी आक्रमण गरे पनि ऊ गोलविहीन हुन पुगेको थियो ।
सो खेलपछि कप्तान मेस्सीले भने खेलका रेफ्री र भिएरप्रति चर्को असन्तुष्टि पोखे । खेलपछि मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै मेस्सीले ब्राजिल जितको हकदार रहेको बताउँदै सो खेलमा भिएआर प्रयोग नगरिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । उनले खेल दौरान पटक–पटक आफूहरूमाथि गम्भीर फउल हुँदा रेफ्रीले सही निर्णय नलिएको र कम्तीमा भिएआरसम्म पनि नगएको भन्दै मेस्सीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । मेस्सीले आफूहरूले कम्तीमा एक पेनाल्टी बिनाविवाद पाउनुपर्ने भए पनि रेफ्रीले पक्षपात गरेको आरोप लगाए । खेलमा रेफ्रीले सही निर्णय लिन नसक्दा खेलको नतिजामा असर पर्ने मेस्सीको प्रतिक्रिया थियो ।
‘उनीहरूले हाम्रो भन्दा राम्रो खेले । उनीहरूले चाँडै पहिलो गोल गरे । तर, केही गम्भीर फउलमा हामीलाई पेनाल्टी दिइएन,’ मेस्सीले भने, ‘यो क्षमायोग्य छैन । तर, कोपाको आयोजकले यस्ता खेल खेलाउने रेफ्रीमाथि ध्यान दिनेछ भन्ने लागेको छ । हाम्रा लागि यो खेल निकै खराब रह्यो ।’ मेस्सीले अघि थपे, ‘हामीले नतिजा निकाल्न सकेनौं । तर, हामीले सक्दो प्रयास गरेका थियौं । सबै कुरा उनीहरूको पक्षमा गयो । यतिसम्म कि, हामीले अपिल गरेका फउलमा पनि रेफ्रीले भिएआरमा जान आवश्यक ठानेनन् । कोपामा उनीहरूले केही घटिया कुरा देखाउन प्रयास गरे । सम्बन्धित संस्थाले यसबारे केही गर्नेमा आशा राख्छु । तर केही हुनेछैन । किनभने, सो संस्थामा उनीहरूको बोलवाला चल्छ ।’
प्रकाशित मिति १८ असार २०७६, बुधबार ०६:५६